Ondana fanontam-pirinty vita amin'ny boribory roa
Pillow misy tsipika vita amin'ny landihazo miaraka amin'ny famenoana fibre bararata
Famoronana lamba: landihazo 100%, landy madio voafantina avo lenta, mahasalama ary sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy mahasosotra ny hoditra, mahazo aina sy malefaka hankafizana, mahamando, mandoka ary tsy milamina.
Tencel Pillowcase Sy Pillowcase Combination
Famenoana: 70% Pes + 30% fibre bambuaka dia mahia tahaka ny landy ary hazavana toy ny any ambany. Mivadika avy hatrany aorian'ny fanerena azy tsy misy fanovana na fanangonana. Mifanaraka foana amin'ny tsipika momba ny vatana ary manome fanohanana malefaka toy ny rahona.
Raharaha landihazo landihazo & fitambarana ondana
Famoronana lamba: 100% landihazo vita amin'ny laoniny 100gsm, marefo sady marefo amin'ny hoditra, tsy misy mahasosotra, tsara Permeabilité amin'ny rivotra, tsy misy baolina, Pirinty vita amin'ny tontolo iainana, tsy misasa ny lamba, mazava sy tsotra ny endriny, mazava loko, tsy milay, tsy matanjaka, tsy Mora homarihina, ary misy mangina
Pillow an-tanety vita pirinty amin'ny National style
Lamin'ny tany am-boalohany nolokoana tanana, loko tsara sy marevaka, vita pirinty ary nolokoin'ny haitao fanaovana pirinty mafana. Ny maodely roa sosona dia mampiavaka ilay ondana hatrany anoloana ka hatrany aoriana. Mora ny manala sy manasa azy, azo sasana amin'ny tanana sy milina.
Trangam-bantona anglisy Flannel Britanika mahazatra
Famolavolana modely tahaka ny firenena britanika, ny lokony dia miavaka kokoa noho ny endrika azy, tsotra nefa tsy mitongilana. Ny asa-tànana stitch telozoro manodidina ny bodofotsy iray manontolo dia tsara sy matanjaka. Mora ny miala asa. Fiasana kanto.
Palitao fanatanjahan-tena, Fanodinana santionany sy famokarana, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Lamba firakotra roa sosona, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy,